INONA NY WINDOWS 10 POWER USER MENU (WIN + X)? - MALEFAKA
Inona ny Windows 10 Power User Menu (Win + X)?
Navoaka tamin'nyNohavaozina farany: Febroary 16, 2021
Ny mpampiasa interface tsara ao amin'ny Windows 8 dia nandalo fiovana lehibe. Ny dikan-teny dia nitondra endri-javatra vaovao sasany toy ny menu mpampiasa herinaratra. Noho ny lazan'ilay endri-javatra dia nampidirina tao Windows 10 ihany koa.
Ny sakafo fanombohana dia nesorina tanteraka tao amin'ny Windows 8. Fa kosa, nampidirin'i Microsoft ny menio mpampiasa Power, izay singa miafina. Tsy natao ho solon'ny sakafo fanombohana izany. Saingy ny mpampiasa dia afaka miditra amin'ny endri-javatra mandroso sasany amin'ny Windows amin'ny alàlan'ny menio mpampiasa Power. Windows 10 dia samy manana ny menu fanombohana sy ny menu mpampiasa herinaratra. Raha ny sasany Windows 10 dia mahafantatra an'io endri-javatra io sy ny fampiasana azy ny mpampiasa, maro no tsy.
Ity lahatsoratra ity dia hilaza aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny menio mpampiasa Power.
Hevitra ato Anatiny[ afeno ny ]
Ahoana ny fanokafana ny menio mpampiasa Power?
Inona no atao hoe fanalahidin'ny sakafo mpampiasa Power?
Ny menu Power User - amin'ny antsipiriany
Fanoloana ny Command Prompt
Ahoana ny fomba fanamboarana ny menio mpampiasa Power Windows 10?
Izy io dia endri-javatra Windows nampidirina voalohany tao amin'ny Windows 8 ary nitohy tao amin'ny Windows 10. Fomba iray hidirana amin'ny fitaovana sy endri-javatra izay idirana matetika, amin'ny fampiasana hitsin-dàlana. Menu pop-up fotsiny izy io izay misy ny hitsin-dàlana ho an'ny fitaovana fampiasa mahazatra. Mamonjy fotoana be ny mpampiasa izany. Noho izany dia endri-javatra malaza izy io.
Ny menio mpampiasa Power dia azo idirana amin'ny fomba 2 - azonao atao ny manindry Win + X eo amin'ny klavier na tsindrio havanana amin'ny menu fanombohana. Raha mampiasa fanaraha-maso ecran fikasihana ianao dia tsindrio ary hazòny ny bokotra fanombohana mba hanokafana ny menio mpampiasa Power. Ireto ambany ireto ny sarin'ny menio mpampiasa Power izay hita ao Windows 10.
Ny menio mpampiasa Power dia fantatra amin'ny anarana roa hafa - Win + X menu, WinX menu, Power User hotkey, Windows Tools menu, Power mpampiasa task menu.
Andeha hotanisaintsika ireo safidy azo alaina ao amin'ny menio mpampiasa Power:
Fandaharana sy endri-javatra
Fifandraisana amin'ny tambajotra
Atsaharo na mivoaha
Ity sakafo ity dia azo ampiasaina hitantana haingana ny asa. Amin'ny fampiasana ny sakafo fanombohana nentim-paharazana, mety ho sarotra ny mahita ireo safidy hita ao amin'ny menio mpampiasa Power. Ny menio mpampiasa Power dia novolavolaina tsara amin'ny fomba tsy ahafahan'ny mpampiasa vaovao miditra amin'ity menio ity na manao hetsika tsy misy diso. Rehefa nilaza izany, na ireo mpampiasa efa za-draharaha aza dia tokony hitandrina ny hamerina ny angon-dry zareo rehetra alohan'ny hanaovana fanovana amin'ny alàlan'ny menio mpampiasa Power. Izany dia satria ny endri-javatra sasany ao amin'ny menio dia mety hitarika amin'ny fahaverezan'ny angona na mety hahatonga ny rafitra hikorontana raha tsy ampiasaina araka ny tokony ho izy.
Ny safidy tsirairay ao amin'ny menio mpampiasa Power dia manana lakile mifandray amin'izany, izay rehefa tsindriana dia mitondra o miditra haingana amin'io safidy io. Ireo fanalahidy ireo dia manafoana ny filàna manindry na manindry ny safidy sakafo hanokafana azy ireo. Antsoina hoe hotkeys menu mpampiasa Power izy ireo. Ohatra, rehefa manokatra ny menio fanombohana ianao ary manindry U ary avy eo R, dia hanomboka ny rafitra.
Andeha hojerentsika izao izay ataon'ny safidy tsirairay ao amin'ny menio, miaraka amin'ny hotkey mifanentana aminy.
1. Fandaharana sy endri-javatra
Hotkey - F
Azonao atao ny miditra amin'ny fikandrana programa sy endri-javatra (izay tsy maintsy sokafana amin'ny Settings, Control Panel). Amin'ity varavarankely ity dia manana safidy hanesorana programa ianao. Azonao atao ihany koa ny manova ny fomba fametrahana azy ireo na manova ny programa izay tsy voapetraka tsara. Azo jerena ny fanavaozana Windows nesorina. Ny endri-javatra Windows sasany dia azo alefa / vonoina.
2. Safidy hery
Hotkey – O
Ity dia mahasoa kokoa ho an'ny mpampiasa laptop. Azonao atao ny misafidy aorian'ny fotoana tsy ahafahan'ny mpanara-maso dia maty, misafidy izay ataon'ny bokotra herinaratra, ary misafidy ny fomba ampiasan'ny fitaovanao ny herinaratra rehefa ampidirina amin'ny adaptatera. Averina indray, raha tsy misy an'ity hitsin-dàlana ity dia tsy maintsy miditra amin'ity safidy ity ianao amin'ny fampiasana ny tontonana fanaraha-maso. Start menu > Windows System > Control Panel > Hardware and Sound > Power options
3. Mpijery hetsika
Hotkey - V
Event Viewer dia fitaovana fitantanana mandroso. Izy io dia mitazona ny diarin'ny zava-nitranga nitranga tao amin'ny fitaovanao. Ampiasaina hijerena hoe oviana no fotoana farany narehitra ny fitaovanao, na nianjera ny fampiharana iray, ary raha eny, oviana ary nahoana izy io no nianjera. Ankoatra ireo, ny antsipiriany hafa izay ampidirina ao amin'ny log dia - fampitandremana sy hadisoana izay niseho tamin'ny fampiharana, serivisy ary ny rafitra fiasana sy ny hafatra momba ny sata. Ny fandefasana ny mpijery hetsika avy amin'ny sakafo fanombohana mahazatra dia dingana lava - Start menu → Windows System → Control Panel → System and Security → Administrative Tools → Event Viewer
Hotkey - Y
Ity hitsin-dàlana ity dia mampiseho ny toetran'ny rafitra sy ny fampahalalana fototra. Ny antsipirihan'ny hitanao eto dia - ny dikan-Windows ampiasaina, ny habetsaky ny CPU ary ram ampiasaina. Azo jerena ihany koa ny fanondroana fitaovana. Ny mombamomba ny tambajotra, ny fampahalalana momba ny fampahavitrihana Windows, ny antsipirian'ny mpikambana ao amin'ny vondrona miasa dia aseho ihany koa. Na dia misy hitsin-dàlana mitokana ho an'ny Device Manager aza dia azonao atao ny miditra amin'ity hitsin-dàlana ity ihany koa. Azo idirana ihany koa ny firafitry ny lavitr'ezaka, ny safidin'ny fiarovana ny rafitra, ary ny fanovana mandroso hafa.
5. Mpitantana fitaovana
Hotkey - M
Fitaovana fampiasa matetika ity. Ity hitsin-dàlana ity dia mampiseho ny fampahalalana rehetra momba ny fitaovana napetraka Azonao atao ny misafidy ny hanesorana na hanavao ny mpamily fitaovana. Azo ovaina koa ny fananan'ny mpamily fitaovana. Raha tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitaovana iray dia ny Device Manager no toerana hanombohana famahana olana. Ny fitaovana tsirairay dia azo alefa na kilemaina amin'ny fampiasana ity hitsin-dàlana ity. Azo ovaina ny fanamafisam-peo isan-karazany ao anatiny sy ivelany mipetaka amin'ny fitaovanao.
6. Fifandraisana amin'ny tambajotra
Hotkey - W
Ireo adaptatera tambajotra misy amin'ny fitaovanao dia azo jerena eto. Ny fananan'ny adaptatera tambajotra dia azo ovaina na kilemaina. Ny fitaovana tambajotra fampiasa matetika miseho eto dia - adapter WiFi, adapter Ethernet, ary fitaovana tambajotra virtoaly hafa ampiasaina.
7. Fitantanana kapila
Hotkey - K
Fitaovana fitantanana mandroso ity. Izy io dia mampiseho ny fomba fisarahana ny kapila mafy anao. Azonao atao koa ny mamorona partitions vaovao na mamafa partitions efa misy. Azonao atao ihany koa ny manendry litera fiara sy manamboatra fanafihana . Tena soso-kevitra ny backup ny angonao rehetra alohan'ny hanaovana asa amin'ny volume. Mety ho voafafa ny fizarazarana manontolo izay hiteraka fahaverezan'ny angona manan-danja. Noho izany, aza manandrana manova ny fizarazarana kapila raha tsy azonao antoka ny zavatra ataonao.
8. Fitantanana informatika
Hotkey - G
Ny endri-javatra miafina Windows 10 dia azo idirana amin'ny fitantanana solosaina. Azonao atao ny miditra amin'ny fitaovana sasany ao anatin'ny menio toy ny Event Viewer, Mpitantana Fitaovana , Mpitantana Disk, Performance Monitor , Mpandrindra asa, sns…
9. Command Prompt sy Command Prompt (Admin)
Hotkeys - C sy A tsirairay avy
Izy roa dia fitaovana iray ihany ary manana tombontsoa samihafa. Ny command prompt dia ilaina amin'ny famoronana rakitra, famafana ny lahatahiry ary fandrafetana ny kapila mafy. Ny Command Prompt mahazatra dia tsy manome anao ny fidirana amin'ireo endri-javatra mandroso rehetra. Noho izany, Command prompt (admin) dia ampiasaina. Ity safidy ity dia manome tombontsoa ho an'ny mpitantana.
10. Mpitantana asa
Hotkey - T
Ampiasaina hijerena ireo rindranasa mandeha amin'izao fotoana izao. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny rindranasa izay tokony hatomboka amin'ny alàlan'ny default rehefa feno OS.
11. Panel fanaraha-maso
Hotkey - P
Ampiasaina hijerena sy hanovana ny firafitry ny rafitra
Ny File Explorer (E) sy ny Fikarohana(S) dia namoaka fikandrana File Explorer vaovao na varavarankely fikarohana. Hanokatra ny fifanakalozan-dresaka Run. Ity dia ampiasaina hanokafana baikon'ny baiko na rakitra hafa izay ampidirina ao amin'ny saha fampidirana ny anarany. Atsaharo na mivoaka dia ahafahanao manidy na mamerina haingana ny solosainao.
Desktop (D) - Izany dia hanamaivana / hanafina ny varavarankely rehetra mba hahafahanao mijery ny desktop.
Raha tianao ny PowerShell noho ny command prompt, azonao atao soloy ny command prompt . Ny dingana fanoloana dia, tsindrio havanana eo amin'ny taskbar, mifidiana fananana ary tsindrio ny tabilao Navigation. Hahita boaty marika ianao - Soloy amin'ny Windows PowerShell ny Command Prompt ao amin'ny menio rehefa manindry havanana amin'ny zoro ambany havia aho na manindry Windows key+X . Kitiho ny boaty.
Mba hisorohana ny rindranasa an'ny antoko fahatelo tsy hampiditra ny hitsin-tongony ao amin'ny menio mpampiasa Power, Microsoft dia ninia nanasarotra anay ny manamboatra ny sakafo. Ny hitsin-dàlana hita eo amin'ny menu. Izy ireo dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fandefasana azy ireo amin'ny alàlan'ny Windows API hashing function, ny soatoavina hash dia voatahiry ao amin'ny hitsin-dàlana. Ny hash dia milaza amin'ny menio mpampiasa Power fa ny hitsin-dàlana dia iray manokana, noho izany dia hitsin-dàlana manokana ihany no aseho amin'ny sakafo. Ny hitsin-dàlana mahazatra hafa dia tsy ho tafiditra ao amin'ny sakafo.
Soso-kevitra: Asehoy ny Control Panel ao amin'ny WinX Menu ao Windows 10
Hanova ny Windows 10 Power mpampiasa Menu , Win+X Menu Editor dia fampiharana fampiasa matetika. Fampiharana maimaim-poana izy io. Azonao atao ny manampy na manala singa amin'ny sakafo. Ny hitsin-dàlana ihany koa dia azo ovaina anarana sy amboarina. Ianao dia afaka alaivo eto ny fampiharana . Ny interface dia mora ampiasaina ary tsy mila torolalana ianao hanombohana miasa amin'ny fampiharana. Ny fampiharana koa dia mamela ny mpampiasa handamina ny hitsin-dàlana amin'ny fanakambanana azy ireo.
Mpanoratra teknolojia ao amin'ny Cyber ​​S i Elon. Efa 6 taona teo ho eo izy no nanoratra ny fomba fitarihana ary nandrakotra lohahevitra maro. Tiany ny miresaka lohahevitra mifandraika amin'ny Windows, Android, ary ireo fika sy toro-hevitra farany.